Ye-Mon's Personal Pages: Infamous
Labels: burma, burmese, forget-me-not, myanmar, politics
I'm doing the exact oppostite. I choose crowded corridors and staircases so that when people ask me what they can do, I can tell themalist of things from boycotting Olympics to contributing toward emergency funds set up for Burma.
ကိုရဲမွန်ရေ .. ကျွန်တော်ခံစား နေရတာလည်း ထပ်တူ လောက်ပဲ ... နိုင်ငံကို လူတွေ ပိုပြီး ဂရုပြု လာကြပေမယ့် မပျော်နိုင်ဘူး ရှောင်နေရတယ် ... :|
No need to shy away...
Face it.....do what you can do....
ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အစ်မတစ်ယောက်ဆိုရင်ဖြင့် ခေါင်းပြူဖို့နေနေသာသာ လိပ်ခွံပါထားပြီး ပြေးချင်စိတ်ပေါက်နေလေရဲ့။
မဟုတ်သေးပါဘူး။ ရှက်လို့ ရှောင်မဲ့ အစား ရှက်စရာဖြစ်အောင် မေးသူတွေ ကို သနားစရာကောင်းတဲ့ သူအဖြစ် ပြောင်းပေးရမယ်။ သူတို့ ကိုပါ ယူအဲမ်ကို စာရေးခိုင်း ဒါမှ ရှက်ရတာ အဖော်ရမယ် စိတ်ညစ်ရတာ အဖော်ရမယ်. Ashame becomes What’sashame.
မှတ်ချက်ထားသွားသူများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ။